Khipha iplagi, khulula, kwaye wonwabele iiRockies!
Indlwana ezolileyo ehlathini! Ikhabhinethi inamagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-2, kunye negumbi lelanga elimangalisayo lokuhlala kwi-300 kunye neentsuku zelanga ngonyaka. Njengoko usonwabela ukuzola kweHlathi leSizwe ngaphandle nje komnyango wangaphambili, yazi ukuba le khabhathi isekuhambo olufutshane ukusuka eLeadville, okanye eBuena Vista ukulungisa isixeko sakho. I-Twin Lakes kunye nelali yaseTwin Lakes zihamba nje ngokukhawuleza phezu kwenduli! I-Mt Elbert Forebay, i-Turquoise Lake, kunye ne-Ski Cooper nazo zikufuphi.
Lake County STR Ilayisensi #2021-49A.
IRex Resort ibekwe malunga nehektare enye kwipayina kufutshane neTwin Lakes. Ukusuka kwiyadi, zikhululeke ukuphumla kwi-swing kwaye uthathe iimbono zeColorado kwincopho yesibini ephezulu kwiNtaba yeMassive. Kwiinyanga zasehlotyeni, kukho umngxuma wezihlangu zehashe kwindawo engaphambili yeyadi. Idesika enkulu, enezitulo kunye necanopy yomthunzi inkulu ngeengokuhlwa zasehlotyeni ukuze ithathe iimbono zeMosquito Range ukuya empuma. Ukuhamba ngaphandle komnyango wangaphambili kwaye ukuya kuthi ga kumda wokuqhuba kubonelela ngombono onomtsalane weMt Elbert, eyona ndawo iphakamileyo yaseColorado. Nokuba liliphi ixesha lonyaka, iinkwenkwezi zinokubonwa kangangeekhilomitha. IRex Resort yindawo yokukhupha iplagi, ukuphumla, kwaye ukonwabele konke okunokwenziwa ziiRockies!
Indlu ibekwe kufutshane ne-9,600 yeenyawo phezulu kwiiRockies! Nceda ucinge ngeziphumo ezinokubakho lo mphakamo, ngakumbi xa usuka kufutshane nomphakamo wolwandle. Ukusela amanzi amaninzi KUFUNEKA! Kwakhona, xa usonwabele ngaphandle khumbula ukuba ikhefu rhoqo libalulekile.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, indlu isondele kwizinto ezininzi ezenza le ndawo ibe yindawo enkulu yokutyelela. Nazi ezinye izinto onokuzenza ngelixa ukwindawo.
I-Snowshoe ngaphandle komnyango wangaphambili kunye nehlathi leSizwe. Ukuba uhamba ngekhephu ngaphaya komda ukuya emazantsi, ufumana umbono omkhulu weTwin Lakes. I-Snowshoe malunga neekhilomitha entshonalanga kunye nombono omkhulu we-Mt. Elbert Forebay ulindele! Amaxesha amaninzi iimoto zekhephu sele zikupakishele indlela, ngoko ke zenza uhambo lube lula kakhulu. Kukho iindawo ezimbalwa eLeadville eziqesha izihlangu zekhephu nazo.
Ukuloba komkhenkce kukwadume kakhulu kwiinyanga zasebusika kwaye kuvunyelwe kwiTwin Lakes nakwiTurquoise Lake. Ukuba awuzange ulobe ngaphambili, iLeadville ibonelela ngezikhokelo kunye nezixhobo zokurenta. Kwakhona kumnandi ukuqhubela eTurquoise kwaye ubone wonke umsebenzi wokuloba.
Iimoto zesnowmobile nazo zivumelekile ukuba zizulazule kakhulu kwiHlathi leSizwe. Kukho izikhokelo kunye neekhenkethi ezikhoyo kuyo yonke indawo. Nceda uqhagamshelane nesikhululo se-Leadville Ranger (okwangoku sivaliwe ngenxa ye-COIVD) okanye kwi-intanethi kuyo yonke imithetho kunye nemimiselo malunga ne-snowmobiling kwi-National Forest.
E-Leadville, kukho induli yetyhubhu. Ikufuphi ne-US24 kanye emantla esikhululo seenqwelomoya. Nceda uqaphele ukuba ukunyuka induli kuyazenzela.
I-Leadville ikwabonelela nge-ice rink yangaphandle yokutyibiliza. Kukwakho nemidlalo yokujija erenkini ngamaxesha athile. Jonga iwebhusayithi yeSixeko saseLeadville ngolwazi olongezelelweyo.
Ukuba ukutyibiliza ekhephini kukunqumla ilizwe (okanye ukukhwela ikhephu kwiseti, kumzila olungiswe), emva koko uye kwiKhosi yeGalufa ePhakamileyo yaseMelika ukuchitha imini. Ikhosi yeGalufa iMt Massive ibonelela ngeemayile zeendlela ezilungiselelweyo. Kukho umrhumo omncinci womzila onceda ekuhlawuleni ukulungiswa kweendledlana. Iisnacks kunye nerenti nazo ziyafumaneka. Izinja nazo zamkelekile okoko nje zibotshiwe.
Kunokuba ezantsi ekhephini? I-Ski Cooper yeyona ndawo ikufutshane ne-ski endlwini. Imalunga nemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 kwiindlela ezomileyo encotsheni yeTennessee Pass. Sisitshixo esisezantsi kakhulu akukho frills intaba. IMonarch Mountain ikwasisitshixo esisezantsi akukho ntaba inqabileyo emazantsi endlu. Kumalunga ne-1.5 iiyure emazantsi. Uhamba kwiidolophu zaseBuena Vista naseSalida endleleni. Iindawo ezintle zokumisa imingxuma! Ngaba ujonge ngakumbi indawo yokutyibiliza ekhephini? Emva koko iNtaba yeCopper yindawo yoko. Emva phezu Fremont Pass ecaleni I-70, yintaba enkulu. Malunga nemizuzu engama-45 kwiindlela ezomileyo. Ngaba unayo iEpic Pass? I-Vail kunye ne-Beaver Creek zingaphezulu kancinci kweyure. I-Breckenridge kunye ne-Keystone malunga neeyure ze-1.5.
Hayi umtyibilizi okanye uninzi lomntu wangaphandle? Ungakhathazeki, kuninzi nakuwe. ILeadville inemyuziyam ezininzi ezinikezelwe kwimbali yendawo. ICamp Hale ikufuphi neTennessee Pass ukufunda ngembali yeCandelo leentaba le-10. IZiko loLondolozo lweMigodi leSizwe likwiSixeko saseLeadville. Zombini iLeadville kunye neBuena Vista zinezitalato ezingundoqo ezineevenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela. I-Vail kunye neBreckenridge zihlala ziyimfuneko kwixesha lokuqala kunye neendwendwe ezibuyelayo ngokufanayo! Kukho ezininzi, ezininzi ezahlukeneyo iivenkile kunye nezinto zokuzibona kuzo zombini ezi dolophu. Kananjalo iSilverthorne ibonelela ngodederhu lweevenkile kubo bonke abathengi bebargain!
Njengoko ubona, amathuba maninzi kuye wonke umntu kwiRex Resort! Awunakusijoyina kwaye ufumanise ukuba iphi indawo oyithandayo?
Ngelixa indlu ibuchwephesha ebumelwaneni, ngokuqinisekileyo ayiziva ngathi! Ubumelwane buhlala kufutshane neenyawo ze-9,600, ngoko ke ikhephu linokwenzeka ngokuqinisekileyo kwiinyanga zasebusika. Iindlela zaselumelwaneni zilinywe kakuhle, kodwa zinothuli negrabile. Nceda uqaphele oku ngakumbi ngexesha lasebusika. Ubumelwane buthule kakhulu kwaye busemaphandleni ukonwabela. Mhlawumbi uya kubona amaxhama, ielk, mhlawumbi nexhama! Nceda usincede sigcine izilwanyana zasendle ngokuzinika indawo eninzi kwaye ungazami ukuzondla!
Ngelixa ndingalindelanga nayiphi na imiba ngexesha lokuhlala kwakho, ndihlala ndikhona ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye ndincede ukusombulula nayiphi na imiba onayo. Ndingafumaneka ngefowuni, umbhalo, okanye i-imeyile.